Kugadzira PHP naMaria DB kuisa Mautic paUbuntu 20.04 | Linux Vakapindwa muropa
Imwe nguva yapfuura tanga tichinyora akateedzana ezvinyorwa zvekuisa Mautic, yakakwana yekushambadzira task automation solution. Kunyangwe kumisikidzwa kuri kunetsa, mukufamba kwenguva kunopedzisira kuchibhadhara mukuchinjika uye nemitengo kune zvine chekuita nemhinduro dzetkey senge Hubspot.
1 Kugadzira php naMaria DB
2 Kugadzira PHP
2.1 Kuwana gwaro rekuchengetedza
Kugadzira php naMaria DB
Nhanho inotevera yatinofanira kuita (kunyangwe mumusoro wandavaisa iwo mukutendeuka) ndeyekugadziriswa kwedhatabhesi.
Unogona kuchinja midzi kumushandisi waunoda. Muhwindo rinovhura
Mutsara unotevera, chinja izwi pasiwedhi nephasiwedi yaunoda.
Sezvo dhatabhesi iri imwe yeanodiwa mhuka dzema cybercriminals, isu tinofanirwa kutora matanho ekudzivirira. Isu tinozviita nekutanga script nemurairo uyu:
Pinda purogiramu yemazuva emudzidzi (pinda pasina):
Isa password yawakasarudza mudhatabhesi uye rova ​​Enter
Shandura midzi yedemo? [Y / n]
Dhinda N kuti usiye ikozvino password.
Bvisa vashandisi vasingazivikanwe? [Y / n]
Dhinda Y kuti ubvise vashandisi vasingazivikanwe.
Rega kudzivirira midzi kure? [Y / n]
Dhinda Y kuti usiye kuwana kure.
Bvisa test database uye uwane kwariri? [Y / n] uye
Dhinda Y kuti ubvise dhatabhesi rekuyedza uye kuwana kwaro (Ndinoziva kuti rakadzokororwa, asi aya ndiwo maratidziro anoita iwo mavara)
Kudzoserazve matafura eropafadzo zvino? [Y / n]
Dhinda Y kuti uvandudze maropafadzo
Kana iwe ukatanga iyo Mautic yekuisa wizard, yaizokuratidza matatu zvikanganiso:
Nguva yenguva haina kusetwa.
Haikwane memory memory.
Iyo webhusaiti haina chitupa chekuchengetedza.
Isu tinogadzirisa maviri ekutanga nekugadzirisa zvinhu mu php.ini faira
NaCTRL + W isu tinotsvaga
Pandinomaka mutsara uyu kwauri
; date.timezone = "UTC"
Bvisa semicolon uye kutsiva UTC nenzvimbo yako yenguva. Rondedzero yenzvimbo dzakatsigirwa nguva dzinogona kuwanikwa pano
NaCTRL + W isu tinotsvaga iyi tambo
; cgi.fix_pathinfo = 1
Shanduko 1 kubudikidza 0 uye bvisa semicolon.
Kuti upedze, pinda CTRL + W zvakare uye tsvaga
Isa kukosha muna 512. Kana paine semicolon, ibvise.
Sevha neCTRL + W
Kuwana gwaro rekuchengetedza
Bhurawuza ari kuomarara pane chengetedzo, nerombo rakanaka, tinogona kuwana chitupa chemahara kuratidza kuti saiti yedu ndeyechokwadi. Zvichienderana nekugadziriswa kwemubatsiri wako wekugamuchira izvi zvinogona kuitwa otomatiki kana semi-otomatiki
Kiyi inochengetwa otomatiki pane sevha uye anopihwa chitupa anoiwana uye anotarisa kuti zvese zviri pachokwadi. Mune iyo semi-otomatiki nzira uchafanirwa kuisa iyo kiyi muDNS yako kuitira kuti mupi agone kuiongorora. Kugamuchira kwako kuchakupa mirairo kuti ungazviita sei.
Maitiro acho anotevera:
Isu tinoisa iko kunyorera
Isu tinogadzira yekufananidza chinongedzo kuitira kuti chishande sekunge chiri chechizvarwa chirongwa
Isu tinotanga chirongwa ichi kugadzirisa sevha.
Kana ikakupa meseji yekukanganisa, edza izvi:
Iwe uchaona kuti inokuratidza mavara alphanumeric uye zita raunofanira kuwedzera muDNS yako sezvinyorwa zvinyorwa. Ukangoita. Dhinda pinda uye iye anopa chitupa anoona kuti ndiwe muridzi wenzvimbo.
Kuti upedze iwe unofanirwa kugadzirisa zvakare apache kutanga saiti mune yakachengeteka nzira nekutadza. Unozviita na:
Sarudza sarudzo yekudzosera chitupa.
Iye zvino unogona kuvhura bhurawuza uye isa zita rako renzvimbo. Iwe uchaona iyo yeMautic peji peji iyo inokuudza iwe kuti zvese zvakanaka. Iye zvino unogona kuwana iyo yekumisikidza faira iyo iwe yaunofanirwa kuzadza nerinotevera ruzivo:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kugadzira PHP naMaria DB kuisa Mautic paUbuntu 20.04